Date My Pet » Food Mawaniro wose Student Ukama Nani?
Washington shure kukirasi paruzhinji chikoro sayenzi, pamakadzidza chinokosha zvatinoda muupenyu.
misoro yedu vakazadzwa noruzivo sei isu sevanhu vanoda kuramba dziripo mhepo, mvura uye chikafu wokupona. chokwadi, mhepo uye mvura zvakakosha, asi kune vakawanda wangu mhando imwe chinodiwa chinokosha kuti chaizvoizvo chinokunda ari chikafu. Kungava kuti Ndiri 18 egore munhurume uyo dzimwe nguva anofunga vake chikuru chido sokudya, asi mudzidzi kunyikadzimu zvokudya pazvibvumirano simba guru.
Food kunoita kuti tipfume muzadziko asi mari akaputsa, zvokudya kunounza shamwari pamwe chete, zvokudya ndicho chikonzero kupemberera zuva nezuva uye anogona kuita chero ukama mudzidzi nani.
Regai nditsanangure ...
Handisi inozivikanwa wenhau asi ndine runako chokwadi kuti kubvira pakutanga kwenguva, Ukama vave watangwa uye yakakura nokuda kwezvokudya.
Cavemen uye cavewomen waakaita pamusoro zvakanaka mwedzi-dzakavhenekera kunodya zvinenge zvakakangwa tsindi uye nzungu. The Viking yaitonga aisanganisira yepamusoro nguva pakati vanoda kuitwa akagoverana panguva kwomwoyo mitambo. nhasi, kunyange kuenda nokuda kofi musi kungangotadza inosanganisira zvokudya nava-. Iwe vainzwisise.
In mudzidzi kunyikadzimu, zvokudya unongoramba chinzvimbo ichi mukurumbira zvose zvatinogona ukama.
Pizza anogona kumiririra seanokwanisa kuita zvinhu zvizhinji uye simba ukama musiki nguva dzose. Kashoma kuti mumwe musikana kutaura kwete kune akanaka Pizza zuva (kunyanya kana zviri ane zvinofadza fella). Simple kasina akafanana achirayira kana kuenda akanaka remba Downtown kuti Pizza nzvimbo achaita chero ukama dzibudirire.
Zvose zviri chete akaita saizvozvo nyore nezvokudya.
Kana zviri zuva rako rokutanga kana maviri musi, kana kunosanganisira zvokudya kuti iwe nemumwe wako zvose kunakirwa ipapo kukurukurirana dzichayerera nani, kunyemwerera huchavara, dzinokara enyu zvikuru azere nomufaro uye kazhinji kubatana kwenyu muchabudirira.
Kana uchigara muimba ine kushanda chitofu, hovhoni, tosita, microwave kana kudziyisa rambi ipapo uchigonawo chinhanho ichi ukama Zvinosimbisa. By nokubika pamwe chete, kana majana kugadzirira akanaka kupararira nokuda kwenyu kukosha zvimwe ichava kunonakidza nguva uye pedyo pamwe chete (kunyange kana unyanzvi hwako kubika vari pedyo hapana ... kd achiri chikafu).
Izvi zvinotisvitsa dzokugara upenyu. Pane chinhu chakanaka kuti vadzidzi vose vane zvokudya urongwa achanzwisisa. Aine nyore rectangle pakati repurasitiki, munhu anogona kuwana yakawanda yakawanda zvokudya chii sokuti muduku mari. Rova zvakasimba, udye, uye kana dzingasanganisira nyore kudanana chinoumba. Most kudya urongwa vanotokwanisa kushandiswa zvose pamusoro kembasi uye pane vamwe Downtown restaurants. Izvi zvinoita nyore kuwana zvokudya uye saka nyore nzira kubhadhara uye rambai misi.
Munyika dzidzo yepamusorosoro, zvokudya anogona kuita chero ukama mudzidzi nyore, nane, uye wakarurama kuti zvakawanda zvikuru. Vanoti rudo haafaniri kuva chikonzero ... asi chokwadi inoda chikafu.
4 Simba Miitiro Of Happy Relationships